Madaxweyne Shiikh Shariif oo gacantiisa ku bur buriyey dowladii uu madaxweynaha ka ahaa kadib.
Posted by admin on December 28 2011 13:30:46
HS:-Madaxweyne Shiikh Shariif oo gacantiisa ku bur buriyey dowladii uu madaxweynaha ka ahaa kadib markii. wararka maanta Dec,28/2011.
HS:-Madaxweyne Shiikh Shariif oo gacantiisa ku bur buriyey dowladii uu madaxweynaha ka ahaa kadib markii uu jabiyey kana dhigay go,aan ay gaareen ku dhawaad 300 mudane oo xil ka qaadis ku sameyey gudoomiyahii hore ee baarlamanka Shariif Hasan wax kama jiraan.
Shiikh Shariif oo hareer maraya go,aan ay gaareen mudanaashii isaga u doortay xilka uu ku magacaaban yahay ayaa waxuu ku xad gudbay dhawr qodob oo u yaala amaba ku qoran dastuurka markii uu ogolaaday shirkii Garoowe inuu kala qeyb galo gudoomiye uu muran ku jiro jagadiisa amaba laga qaadey.
Hadaba qodobada cadeynaya in ay bur burtay amaba bur bur qarka u saaran tahay TFGda dhan laga soo bilaabo xukumada ilaa madaxweyne Shariif ayaa waxey dhamaantood ku qoran yahiin dastuurkii lagu soo dhisay 2004kii dalka Kenya taasi oo suuro galineysa ineyba dhamaan si sahlan oo waliba lama filaan ah meesha uga baxdo TFGda dhan inta aanba la gaarin doorashada soo socota.
Hadaba waxaan jirin taariikhda aduunkane ka dhicin dastuurka wadanka u degsana aysan ku qorneyn ku dhawaad 300 mudane oo go,aan ay gaareen yiraahdo madaxweyne ay markaasi soo doorteen mudanayaashu wax ka jira ma leh isagoo difaacaya gudoomiye xilkii laga qaaday.
Madaxweynaha marka buuq yimaado ma kala diri karaa baarlamaanka awoodse ma u leeyahay?
Hadaba si aan shacabka loo jahwareerin qodobada uu xilkiisa ku weynayo iyadoo xitaa aysan barlamaanka xil ka qaadis ku sameyn madaxwyne Shiikh Shariif qodob qodob ayaanu uga soo saareynaa dastuurka filo goor dhaw.
Sidoo kale hadii madaxweynaha qalaalso jirta markaasi oo ka dhaxtaagan baarlamaanka dhexdiisa uu dhinac la safto sharciga uma saamaxayo inuu ku fikiro kala dirida mudanayaasha , maadama isaga iyo shariif Hasan isku dhinac yahiin, taasi micnaheedu waa dastuur lagu dhaqmo iyo kala danbeyn ayaan jirin.
Dastuurka ay hada ku shaqeyso TFGda hadii la raaco wadanka kama jirto wax dowlad ah.
1- Waxaa shir aan lagala tashan mudanayaasha baarlamanka amaba aysan intooda badan raali ka aheyn lagu qabtay Garoowe.
2- Iyadoo la isticmaalayo awoodo aan ku qorneyn dastuurka u degsan TFGda ayey shirkii Garoowe ka qeyb galeen dhawr xildhibaan iyo gudoomiyahii xilka laga qaaday.
3- Shirkii markii uu soo gabo gaboobay waxaa laga soo saaray qodobo aan soo jeedin aheyn ee la yiri waa in la sameeyaa sida in la dhimo tirada baarlamaanka 4ta sano ee soo soctana lagu soo xulo mudanayasha 225ta ah habka 4.5ka.
4- Waxii ka soo baxay shirkii Garoowe lama horkeenin baarlamaanka oo ka dooda lama dhihin waxuu madaxweynahii yiri sharci ma aqaane Shariif Hasan hala daayo.
Hadaba dastuurka iyo Shariif Hasan midkeebaa xoog badan, maxuuse Shariif Haan kaka duwan yahay masuuliyiintii isaga ka horeysay ee xil ka qaadista lagu sameeyay?
La soco qodobada xaqiijinaya iney TFGda bur burtay oo aanu dhamaantood kala soo baxnay dastuurka wadanka si aad u ogaato waxii ka danbeyey shirkii Garoowe in aysan dalka ka jirin wax dowlad ah kaliya baarlamaanka maahane.
Isha warka Hiiran State